> Resource> DVD> Olee Ọkụ Lightroom ngosi mmịfe ka DVD
Ọtụtụ ndị nwere mmasị na-eke a ngosi mmịfe na Adobe Photoshop Lightroom na mgbe ahụ chọrọ ọkụ Lightroom ngosi mmịfe ka DVD, otú ha nwere ike na-enwe ha na nnukwu ihuenyo TV ma ọ bụ DVD ọkpụkpọ kama a na kọmputa. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị mfe ọrụ isure a DVD si Lightroom foto ngosi mmịfe. Ebe ọ bụ na ọ dịghị ihe kpọmkwem nhọrọ maka gị mbupụ Lightroom ngosi mmịfe ka DVD, ị nwere mbupụ a video faịlụ mbụ na mgbe na-eji a kemfe DVD ọkụ ngwá ọrụ iji ọkụ na-DVD. Ọfọn, ọgụ na mgba dị otú ahụ a smart usoro ihe omume a ogologo oge? Wondershare DVD Onye Okike (DVD Creator for Mac) nwere ike inyere gị aka.
Nke a ike-na-atụ aro Lightroom ka DVD burner ebe a bụ ike na-ọkụ foto ngosi mmịfe ka a ọkachamara-na-achọ DVD nnọọ ngwa ngwa na-adị mfe. Na dum usoro bụ nnọọ anọ mfe nzọụkwụ. Site n'ụzọ, ị nwekwara ike retouch gị ngosi mmịfe tupu DVD ọkụ, na-ekwu, hazie DVD menu n'okirikiri na foto a, buttons wdg
1 Import Lightroom ngosi mmịfe faịlụ
Nke mbụ niile, i kwesịrị mbubata gị Lightroom ngosi mmịfe na-azọpụta ha na H.264 ma ọ bụ MPEG-4 faịlụ na kọmputa. Mgbe ahụ, ịnọgide na-mbubata ngosi mmịfe video faịlụ site na kọmputa gị na diski ike ka ngwa a. Rịba ama na green mmanya na ala-egosi na ị ngụkọta size nke ndị a kwukwara ngosi mmịfe faịlụ.
Ime ya, i nwere abụọ ụzọ dị iche iche. Pịa Import bọtịnụ na n'aka ekpe nke a DVD burner ka ịgbakwunye faịlụ na ị chọrọ. Ma ọ bụ ozugbo ịdọrọ lekwasịrị faịlụ ka ya ekpe ebi ndụ.
Ozugbo gị Lightroom ngosi mmịfe faịlụ na-dị, ị nwere ike pịa "↑" ma ọ bụ "↓" nhọrọ na ala ka ịhazie play iji ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọbụna see "Tinye aha" bọtịnụ tinye ihe utu aha ma ọ bụrụ na ị chọrọ iji hazie videos mma .
2 Dezie Lightroom ngosi mmịfe faịlụ (nhọrọ)
See pen icon n'akuku video ihe ị chọrọ dezie. Na mgbe ahụ na mmapụta editting window, ị nwere ike ewepụtụ, akuku, bugharia video, ma tinye watermark ka videos. Ọzọkwa, i nwere ike ịgbanwe video ìhè, iche, saturation, na olu wdg
3 Hazie DVD menu
See NchNhr taabụ n'elu, wee pịa na ịdọrọ ihe mmịfe ala iji họrọ otu DVD menu template, na-esote, hazie thumbnail, ederede, ndabere ma ọ bụ tinye n'okirikiri wdg Ọ bụrụ na ị chọrọ ọzọ free menu ndebiri, ị nwere ike ibudata ha online site na ịpị green ala akụ button n'akụkụ.
4 Preview gị oru ngo na ọkụ Lightroom ngosi mmịfe ka DVD
Tupu DVD ọkụ, ị dị nnọọ ịhụchalụ dum oru ngo iji hụ ikpeazụ mmetụta. Ọ bụrụ na ị na-adịghị mkpa ịgbanwe ihe, ị dị nnọọ fanye a ide DVD5 ma ọ bụ DVD9 diski gị DVD mbanye, na ibà ya ere Ọkụ interface site ọkụkụ Ọkụ taabụ ke n'elu. Ebe a, ị nwere ike tinye akara "Ọkụ ka diski" nhọrọ na (nhọrọ) eme ụfọdụ ndị ọzọ ntọala. Ke akpatre, pịa "Ọkụ" button na ala-nri akuku nke interface.
A ngwa ga-eme ndị ọzọ ọrụ na-akpaghị aka. Mgbe mgbe, i nwere ike inwe a dere DVD diski ma ị nwere ike kpọọ ya na ihe ọ bụla DVD ọkpụkpọ ma ọ bụ TV.
Biko na-video nkuzi n'okpuru.
Top 10 DVD saịtị dị ka DVD Alaeze Ukwu